धर्म दर्शन – shubhabihani
१५ कात्तिक, काठमाडौँ । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र गोवद्र्धनको पूजाआजा गरी मनाइँदैछ ।
१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहारको आज तेस्रो दिन आज देशभर दीपावलीका साथ लक्ष्मीपुजा गरिँदैछ ।
१२ कात्तिक, काठमाडौँ । हिन्दुहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइँदैछ ।
१७ असोज, काठमाडौं । दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा हुदैंछ ।
घटस्थापना गरेसँगै नवदूर्गाका ९ वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ । नवरात्रका नौ दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रम्हचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौंथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौ दिन स्कन्दमाता, छौटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्री, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ ।
दशैंको तेस्रो दिन आज देशभरीका नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरुमा भक्तजनहरुको भीड लागेको छ । राजधानीभित्र गुहेश्वरी, मैतिदेवी, दक्षिणकाली, कालिकास्थान, शोभा भगवती, तलेजुभवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्काली र इन्द्रायणीसहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरू बढेका हुन् ।
उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्दकाली, ताप्लेजुङको पाथिभारा, गोरखाको मनकामना लगायतका शक्तिपीठहरुमा भक्तजनहरुको भीड लागेको छ ।
अम्बा, दुर्गा, पार्वती, काली आदि एक हुन् वा अलग-अलग ? नवरात्रकाे सन्दर्भमा जानी राखाैँ
नवरात्रि उत्सवलार्इ नवदुर्गा उत्सव पनि भनिन्छ भने नेपालमा यस पर्वलार्इ बडादशैँका रूपमा मान्ने गरिन्छ । यस नाैरथामा दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वरी आदि सबैलार्इ भगवान शंकरका पत्नी मानेर पूजा गरिन्छ भन्ने एउटा मत छ जुन उचित छ कि छैन ? अाउनुहाेस् जान देवी रहस्य को।
माता अम्बिका काे हुन् : शिवपुराणका अनुसार त्यस अविनाशी परब्रह्म (काल) ले केही कालपछि द्वितीयकाे इच्छा प्रकट गरे। त्यस परब्रह्मभित्र एकबाट अनेक हुने संकल्प उदित भयाे। तब त्यस निराकार परमात्माले अाफ्नाे लीला शक्तिबाट आकारकाे कल्पना गरे, जुन मूर्तिरहित परम ब्रह्म हुन्। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म। ती परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हुन्। एकांकी भएर पनि स्वेच्छाले सबैतिर विहार गर्ने ती सदाशिवले अाफ्नाे विग्रह (शरीर) बाट शक्तिकाे सृष्टि गरे, जुन उनकाे अाफ्नाे श्रीअंगबाट कहिल्यै अलग हुँदैनथ्याे। सदाशिवकाे त्यस पराशक्तिलार्इ प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्वकाे जननी तथा विकाररहित बताइएकाे छ।
त्याे शक्तिलार्इ अम्बिका (पार्वती वा सती हाेइनन्) भनिएकाे छ । त्यसकाे प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी (ब्रह्मा, विष्णु र महेशकी माता), नित्या र मूल कारण पनि भनिन्छ। सदाशिवद्वारा प्रकट गरिएकाे ती शक्तिका ८ भुजाहरू छन्। पराशक्ति जगतजननी ती देवी नाना प्रकारका गतिहरूले सम्पन्न छिन् र अनेक प्रकारका अस्त्रशस्त्र शक्ति धारण गर्दछिन्। एकांकिनी भएर पनि तिनी माया शक्ति संयोगवशात अनेक हुन जान्छिन्। तिनी कालरूप सदाशिवकी अर्द्धांगिनी हुन् । र तिनै शक्ति जसलार्इ जगदम्बा पनि भनिन्छ ।
काे हुन् देवी दुर्गा : हिरण्याक्षकाे वंशमा उत्पन्न एक महा शक्तिशाली दैत्य थियाे, जुन रुरुकाे पुत्र थियाे र त्यसकाे नाम दुर्गमासुर थियाे। दुर्गमासुरसँग सबै देवता त्रस्त हुने गर्थे। त्यसले इन्द्रकाे नगरी अमरावतीलार्इ घेरेकाे थियाे। देवता शक्तिले हीन भएका थिए, फलस्वरूप उनीहरूले स्वर्गबाट भाग्नु नै श्रेष्ठ ठानेर भागेर उनीहरू पर्वतका कन्दरा र गुफाहरूमा गएर लुके र सहायता हेतु आदि शक्ति अम्बिकाकाे आराधना गर्न थाले। देवीले प्रकट भएर देवताहरूलार्इ निर्भिक भएर जान आशीर्वाद दिइन्। एक दूतले दुर्गमासुरलार्इ यी सबै वृतान्तका साथै देवताहरूकाे रक्षण गर्नका लागि छिटै एक अवतार हुने कुरा पनि बतायाे। याे सुनेर तक्षण नै दुर्गमासुर क्रोधित भएर अाफ्ना समस्त सेनालार्इ अस्त्र-शस्त्रसहित भएर युद्धमा जाने अादेश दियाे । त्यसपछि देवता र दानवहरूमा अघोर युद्ध भयाे र देवीले दुर्गमासुर सहित त्यसका समस्त सेनालार्इ नष्ट गरिदिइन् । त्यसबेला देखि देवी दुर्गाका रूपमा विख्यात भइन्।
माता सती : भगवान शंकरलार्इ महेश र महादेव पनि भनिन्छ। उनै शंकरकाे सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति पुत्री दक्षायनीसँग विवाह भएकाे थियाे। यी दक्षायनीलार्इ नै सती भनिन्छ। अाफ्ना पति शंकरकाे अपमान भएकाे कारण सतीले अाफ्ना पिता दक्षकाे यज्ञमा फाल हालेर अाफ्नाे देहलीला समाप्त गरेकी थिइन्। माता सतीकाे मृत देहलार्इ बाेकेर नै भगवान शंकर ठाउँ-ठाउँमा घुम्दै हिंड्न थाले। जहाँ-जहाँ देवी सतीका अंग र आभूषण खसे, त्यहाँ-त्यहाँ शक्तिपीठ निर्मित हुँदै गए। त्यसपछि माता सतीले पार्वतीका रूपमा हिमालयराजका घरमा जन्म लिएर भगवान शिवकाे घोर तपस्या गरिन् र फेरि शिवलार्इ प्राप्त गरी पार्वतीका रूपमा जगतमा विख्यात भइन्।
माता पार्वती : माता पार्वती शंकरकाे अर्की पत्नीं थिइन्। देवी पार्वतीका पिताकाे नाम हिमवान र माताकाे नाम रानी मैनावती थियाे। माता पार्वतीलार्इ नै गौरी, महागौरी, पर्वतपुत्री र शेरावाली भनिन्छ। माता पार्वतीलार्इ पनि दुर्गा स्वरूप मानिएकाे तर वास्तवमा उनी दुर्गा हाेइनन्। यिनै माता पार्वतीका दुर्इ पुत्र एक श्रीगणेश र अर्का कार्तिकेय मानिएका छन्।
नवदुर्गा रहस्य : यी नवदुर्गा हुन्- १.शैलपुत्री २.ब्रह्मचारिणी ३.चन्द्रघण्टा ४.कुष्माण्डा ५.स्कन्दमाता ६.कात्यायनी ७.कालरात्रि ८.महागौरी र, ९.सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालयकी पुत्री भएकी कारण पार्वती मातालार्इ शैलपुत्री पनि भनिन्छ। ब्रह्मचारिणी अर्थात उनले तपश्चर्याद्वारा शिवलार्इ पाएकी हुनाले उनै शैलपुत्री पार्वतीलार्इ नै ब्रह्मचारिणी भनिएकाे हाे। चन्द्रघण्टा अर्थात जसले अाफ्नाे मस्तकमा चन्द्र आकारकाे तिलक धारण गरेकी छिन्। ब्रह्माण्डलार्इ उत्पन्न गर्ने शक्ति प्राप्त गरेपछि उनै भगवतीलार्इ नै कुष्माण्डा भन्न थालिएकाे हाे।वास्तवमा अाफ्नाे उदरभित्र अण्डसमान उनले सिंगाे ब्रह्माण्ड समेटेकी हुनाले उनलार्इ कुष्‍माण्डा भनिएकाे हाे। केही मानिसहरूका अनुसार उनी कुष्माण्डा नामकाे एक समाजद्वारा पूजित भएकी कारणले कुष्माण्डा कहलाएकी हुन्। पार्वतीका पुत्र कार्तिकेयकाे नाम स्कन्दकुमार पनि हाे । त्यसैले स्कन्दकी माता भनिएकी हुन्।
महर्षि कात्यायनकाे तपस्याबाट प्रसन्न भएर उनी उनकाे घरमा पुत्री रूपमा जन्मेकी थिइन् । त्यसैले उनी कात्यायनी पनि भनिन थालिन्। यहाँ उल्लेखनीय के छ भने जसरी भगवान विष्णुका अवतार हुन्छन् त्यसरी नै माताका पनि अनेक अवतार भएका छन्। कात्यायन ऋषिकी कन्याले नै महिषासुरकाे वध गरेकी थिइन्। त्यसकाे वध गरेपछि उनी महिषसुर मर्दिनी कहलाइन्। कुनै समयमा कत नमक एक विख्यात महर्षि थिए, उनका पुत्र कात्य भए तथा यिनै कात्यकाे गोत्रमा नै प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न भएका थिए।
माता पार्वती देवी काल अर्थात हरेक खालका संकट नाश गर्न समर्थ छिन् । त्यसैले उनलार्इ कालरात्रि भनिएकाे हाे। माताकाे वर्ण पूर्णत: गौर अर्थात गाेराे (श्वेत) छ, त्यसैले उनी महागौरी भनिइन्। यद्यपि केही पुराणहरूका अनुसार कठोर तप गरेकाे कारणले जब उनकाे वर्ण कालाे भयाे तब शिवले प्रसन्न भएर उनकाे शरीरलार्इ गंगाजीकाे पवित्र जलले पखालिदिए तब उनी विद्युत प्रभा समान अत्यन्त कान्तिमान-गाेरी भइन्। त्यही बेलादेखि यिनकाे नाम महागौरी भयाे। जुन भक्त पूर्णत: उनी प्रति समर्पित हुने गर्छ त्यसलार्इ उनी हर प्रकारका सिद्धि दिन्छिन् । त्यसैले उनलार्इ सिद्धिदात्री भनिन्छ।
दस महाविद्याहरूकाे नाम र रहस्य : काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरभैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी र कमला। कतै कतै यिनीहरूकाे नाम यस क्रममा राखिएकाे पाइन्छ:-१.काली, २.तारा, ३.त्रिपुरसुन्दरी, ४.भुवनेश्वरी, ५.छिन्नमस्ता, ६.त्रिपुरभैरवी, ७.धूमावती, ८.बगलामुखी, ९.मातंगी र १०.कमला।
काे हुन् चामुण्डा : देवी अम्बिकाका बारेमा हामी उल्लेख गरिसकेका छाैँ। अम्बिकाबाट नै चण्डिकाकाे जन्म भयाे। चण्ड र मुण्ड नामक असुरहरूकाे वध गरेकाे कारणले उनी चामुण्डा कहलाएकी हुन्। महाकाली पनि देवी अम्बाकी पुत्री थिइन्।
मधु र कैटभ वध गर्ने देवी : पद्मपुराण अनुसार देवासुर संग्राममा मधु र कैटभ नामका दुबै भाइ हिरण्याक्षका तर्फबाट लडेका थिए । मार्कण्डेय पुराणका अनुसार उमाले कैटभलार्इ मारेकी थिइन् जसबाट उनी ‘कैटभा’ कहलाइन्। दुर्गा सप्तसती अनुसार अम्बिकाकी शक्ति महामायाले अाफ्नाे योग बलले दुबैकाे वध गरेकी थिइन्। वेबदुनियाबाट नेपालीमा रूपान्तर गरिएकाे ।